१० सालकी बालिका यस्तो अबस्थामा फेला! सारा गाउनै शोकाकुल – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/१० सालकी बालिका यस्तो अबस्थामा फेला! सारा गाउनै शोकाकुल
१० सालकी बालिका यस्तो अबस्थामा फेला! सारा गाउनै शोकाकुल
जनकपुर , १९ असार । धनुषामा दुई दिनदेखि बेप,त्ता एक १० वर्षीया बालिका मृ,तावस्थामा फेला परेकी छिन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका २१ स्थित कुर्थामा रहेको दूधमती नदीको किनारामा १० वर्षीया बालिका कन्चनकुमारी पजियारको शुक्रबार बिहान खेत छेउकै दूधमती नदीमा मृ,तावस्थामा फेला परेकी हुन् ।
स्थानीयले बालिकाको बला,त्कारपछि ह,त्या भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । अहिले घट,नास्थलमा प्रह,री पुगेर अनुस,न्धान थालेको छ । परिवारले बालिका बे,पत्ता भएसँगै खो,जतलासी गरेको थियो तर कतैपनि फेला नपरेपछि बिहीबार अस्थायी प्रह,री चौकी कुर्थामा उ,जुरी दिएका थिए ।
प्रह,रीले घट,नाबारे अनुस,न्धान भइरहेको जनाएको छ । यता घट,नामा संलग्न हुन सक्ने आशं,कामा गाउँकै शम,सानमा बस्ने एक अघोरीलाई गाउँ,लेले नियन्त्र,णमा लिई धनुषा प्र,हरीलाई जि,म्मा लगाएका छन् ।
मृ,तक बालिकाको बुबा बिनोद पजियार पांँच परिवारसंगै कुर्थामा दैनिक मज,दूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै थिए । बालबालिकालाई पालन पो,षण गर्न बिनोद गाउँको हाट बजारमा तरकारी बेच्ने गर्छन । अति विपन्न पजियारको घरमा यतिबेला शोकमा डुबेको छ भने, गाउँलेहरु आ,क्रोशित बनेका छन ।
‘बेसार र ज्वानोले कोरोना निको हुने भ्रममा पर्दा बाबु गुमाएँ’ [ भिडियोसहित ]
टिकटक बनाउन भनेर पुलमा झु;ण्डिँदा ख’सेका भनिएका यु’वकले टिकटक नै नचलाएको पाइयो
स्तिथी भयावह बन्दै,जो कोही जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोला,यस्तो छ आउँदो तयारी…